India A ihlula i-South Africa A kumdlalo we-tri-series
PRETORIA, SOUTH AFRICA - AUGUST 03: Manish Pandey during the 5th 1 Day Tri-angular Series match between South Africa A and India A at Assupol Tuks Oval on August 03, 2017 in Pretoria, South Africa. (Photo by Johan Rynners/Gallo Images)
Iqembu le-Powerade South Africa A lihlangana ne-India A okwesibili kuphele kanzima, njengoba i-India igcine ngokunqoba nge-wicket eyodwa kumdlalo wesihlanu kwi-Obe-Day Triangular Series e-Assupol Tuks Oval ePitoli ngoLwesine.
Iqembu lasekhaya lihlanganise ama-uns angu-266 kuma-overs angu-48.2, kubongwa i-innings encomekayo ephuma ku-Heinrich Klaasen ohlanganise ama-runs angu-127 emabholeni angu-108 emuva kokuthi bashaye kuqala. I-innings ikhiphe iqembu lasekhaya enkingeni, emuva kokuthi lizithole ku-20-3 kuma-overs ayisithupha, ino-four abangu-12 no-six abathathu.
i-South Africa ilahlekelwe u-Henry Davids (14), u-Jason Smith (4) no-Reeza Hendricks (1) kalula ngesikhathi u-Klaasen ehlangana nokapteni, uKhaya Zondo. Bobabili bahlanganise ama-runs angu-43 nge-wicket yesine ngaphambi kokuthi ukapteni ahlulwe ibhola elihle eliphume ku-Siddarth Kaul (3/41) ngokuqala kwe-over yesi-13. Umdlali ovimbayo aphinde ashaye akakuvumelanga lokhu ukuthi kumphazamise kodwa, uhole i-partnership yakhe elandelayo no-Dwaine Pretorius (17) njengoba behlanganise ama-runs angu-63 nge-wicket yesihlanu, kodwa kube ama-runs angu-111 emabholeni angu-118 awahlanganisile nge-wicket yesithupha no-Wiaan Mulder (66) okwenze umehluko.
Lomdlali oneminyaka engu-19 uhambisane kahle no-Klaasen njengoba beshaye kahle behlaselwa i-India. Udlale ngesimilo njengoba u-Klaasen ebedlala nolaka ngaphambi kokuthi u-Krunal Pandya (1/44) emukhipha, eqeda uhambo lomdlali othole ikhulu. Emuva kwalokho, u-Aaron Phangiso no-Junior Dala bahlanganise ama-runs ayisithupha nelilodwa ngokulandelana kwabo njengoba u-Kaul no-Shardul Thakur (4/35) beqeda ngabadllai abashayayo.
u-Manish Pandey no-Sanju Samson bathole ama-runs amaningi kwi-India bephendula umphumela we-South Africa. u-Pandey akaphumanga nama-runs angu-93 emabholeni angu-85 (5 fours, 2 sixes) kwathi u-Samson washaya ama-runs angu-68 (90 balls) ngaphezulu kwe-innings, okunike izivakashi ukuqala okuqinile njengoba bebefuna ukunqoba. Abanye abadlale indima kube u-Pandya (25) no-Rishabh Pant (20), kodwa uhambo lwabo luqedwe abaphosayo, beholwa u-Tabraiz Shamsi (3/55) no-Dala (3/56).
Ama-wicket asekugcineni kuma-overs ayisithupha kuqede ngo-Yuzvendra Chahal (17), u-Pandya no-Kaul (0), kodwa u-Pandey ubekezelile nokho ebenenkwantshu futhi, eno-Mohammed Siraj (2*), bahole iqembu labo ekunqobeni kusele amabhola amabili.
Umdlalo wokugcina weqembu lasekhaya bazowudlala ne-Afghanistan A ngoMgqibelo, 5 August enkundleni efanayo ngaphambi kokuthi baphinde babhekane ne-India kwi-final ngoLwesibili, 8 August.
Yonke imidlalo izovezwa ku-www.cricket.co.za.